အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ – MyanmarEating
ခုမအိုသေးပေမဲ့ ဖတ်ထားရင် ကိုယ့်အတွက် ကာကွယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ချိန်ရသလို၊ ကိုယ့် မိဘတွေအတွက် ဆန်းစစ် ဆင်ခြင်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အကြံလည်းပေးလို့ရတာပေါ့၊ အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ၊ ဘာသာရေး ရူ့ ဒေါင့်ကနေမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ ဘ၀ရူ့တောင့်ကနေ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်….
လင်အိုမယားအို မေတ္တာကောင်းမွန်နေဖို့လိုပါတယ်။အရင်တုန်းက ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတော့ တစ်ယောက်မျက်နာတစ်ယောက်ကြည့်မရတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။
ယော့က်ျားက သမီးဘက်၊ မိန်းမက သားဘက် ပိုရပ်တည်တာမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ ငယ်ရွယ်တုန်းက လင်မယားဆိုပေမဲ့ အိုလာရင် အဖေါ် မွန်ဖြစ်ဖို့၊ ရပ်တည်ချက်တူညီဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ယော့က်ျားပိုက်ဆံရှာ၊ ယော့က်ျား အင်အားကောင်းတော့ အပြင်မှာ နေချင်သလိုနေ၊သားသမီး ကို မျှဝေခံစားမှုမရှိ တတ်တဲ့ ယောက်ျားမျုိုးဟာ၊ အိမ်ထောင်သက် အနှစ် ( ၂၀ ) နောက်ပိုင်းမှာ သားသမီးတွေ ကြီးလာရင် သားသမီးများက အမေဘက်က ရပ်တည်တာ ခပ်များများဆိုတော့ အရင်က ခံခဲ့သမျှ ရန်ညိုး ပြန်ဆပ်တတ်တယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်အသက်ကြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်မိန်းမ နဲ့သားသမီးက ကိုယ့်ကို တကယ်ကောင်းစေချင်ရင် ကိုယ်က သူတို့အပေါ် အရင်ကောင်းထားရတယ်။
နေဖို့ထိုင်ဖို့ အိမ်တစ်လုံး ရှိထားဖို့လို အပ်သလို သားသမီးတွေအတွက်လည်းထိုက်သင့်တဲ့အမွေပေးနိုင်ရပါမယ်။
အိုစာမင်းစာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ရွှေဖြစ်ဖြစ်၊
ပိုက်ဆံဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ချန်ထားရသလို သားသမီး စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ထိုက်သင့်တဲ့အရင်းအနီး ကိုလည်းထုတ်ပေးရပါမယ်။
အချစ်ရဲ့သဘာဝဟာ နောင်မျိုးဆက်ကိုပဲ ဆင့်ပွားပါတယ်။
သားသမီး ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သတ္တ၀ါတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါ သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ မိဘကိုရိုသေတယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးအဆုံးအမနဲ့ သွန်သင်ယူရတယ်။မွေးမြူယူရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သားသမီးတွေ မိဘကိုပြန်ကြည့်ရှု့ စောင့်လျှောက်ဖို့မသေချာတတ်ဘူး။
မိဘများဟာ သားသမီး ( ၁၀ ) ယောက်ကို အပြုံးမပျက် ကျွေးမွေးနိုင်ပေမဲ့၊ သားသမီး (၁၀ ) ယောက်ဟာ မိဘ နှစ်ပါးကို ဆယ်ယောက်လုံးကပြန်ကြည့်နိုင်ဖို့မသေချာနိုင်ဘူး။
အိုတဲ့အခါမှာ ရှိတဲ့ကျန်းမာရေးကို အတိုကောက်ရေးလိုက်တာပါ။ အိုလာရင် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်ဂရုစိုက်ရတယ်။
မနက်တိုင်းလမ်းလျှောက်တာမျိုး ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ရင်လည်း ၊ လုပ်ရှားနိုင်သမျှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်လက်လုပ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်ပါမဟုတ်၊ သားသမီးများအတွက်ပါ လဒ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ့်အတွက် သိပ်မပူရရင် သူတို့အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်လို့ရတာပေါ့ ၊
အိုလာရင် စိတ်နေစိတ်ထား မှန်မှန်ကန်ကန်
ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သားသမီး၊မြေး၊မြစ်တွေနဲ့လည်းချစ်ချစ်ခင်ခင် စည်းစည်းလုံးလုံးနေရပါမယ်၊ကိုယ်အသုံးမကျတော့ဘူးဆိုပြီး မသိမ်ငယ်သင့်ပါဘူး။ သေခြင်းတရားကို တွေးတောပြီး ကြောက်မနေသင့်ပါဘူး။
တစ်ရက်အသက်ရှင်ရင် တစ်ရက်အမြတ်ပဲ၊ တန်အောင်အသက်ရှင်ရမယ် ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး မွေးမြူ ရပါမယ်။ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေရင် အလှူပွဲတွေ၊ ကူညီမူ လုပ်ရှားမူတွေ ၊ ဘာသာရေးပွဲတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှ ပါဝင်လုပ်ရှားသင့်ပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ရွှင်လန်းပြီး သန့်သန့် ပြန့်ပြန့် နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
အသက်ကြီးသူများ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းမြေ့ နိုင်ကြပါစေ။
ခုမအိုသေးပမေဲ့ ဖတျထားရငျ ကိုယျ့အတှကျ ကာကှယျဖို့ ပွငျဆငျခြိနျရသလို၊ ကိုယျ့ မိဘတှအေတှကျ ဆနျးစဈ ဆငျခွငျလို့ ရနိုငျပါတယျ။ အကွံလညျးပေးလို့ရတာပေါ့၊ အိုလာရငျ ဘာတှပွေငျဆငျထားသငျ့သလဲ၊ ဘာသာရေး ရူ့ ဒေါငျ့ကနမေဟုတျပဲ လကျတှေ့ ဘဝရူ့တောငျ့ကနေ ဆှေးနှေးကွညျ့ရအောငျ….
လငျအိုမယားအို မတ်ေတာကောငျးမှနျနဖေို့လိုပါတယျ။အရငျတုနျးက ခဈြခဲ့ကွပမေဲ့ အသကျကွီးလာတော့ တဈယောကျမကျြနာတဈယောကျကွညျ့မရတာမြိုး မဖွဈသငျ့ဘူး။
ယော့ကျြားက သမီးဘကျ၊ မိနျးမက သားဘကျ ပိုရပျတညျတာမြိုး မဖွဈရဘူး။ ငယျရှယျတုနျးက လငျမယားဆိုပမေဲ့ အိုလာရငျ အဖျေါ မှနျဖွဈဖို့၊ ရပျတညျခကျြတူညီဖို့ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
ငယျငယျတုနျးကတော့ ယော့ကျြားပိုကျဆံရှာ၊ ယော့ကျြား အငျအားကောငျးတော့ အပွငျမှာ နခေငျြသလိုနေ၊သားသမီး ကို မြှဝခေံစားမှုမရှိ တတျတဲ့ ယောကျြားမြုိုးဟာ၊ အိမျထောငျသကျ အနှဈ ( ၂၀ ) နောကျပိုငျးမှာ သားသမီးတှေ ကွီးလာရငျ သားသမီးမြားက အမဘေကျက ရပျတညျတာ ခပျမြားမြားဆိုတော့ အရငျက ခံခဲ့သမြှ ရနျညိုး ပွနျဆပျတတျတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျအသကျကွီးတဲ့အခါ ကိုယျ့မိနျးမ နဲ့သားသမီးက ကိုယျ့ကို တကယျကောငျးစခေငျြရငျ ကိုယျက သူတို့အပျေါ အရငျကောငျးထားရတယျ။
နဖေို့ထိုငျဖို့ အိမျတဈလုံး ရှိထားဖို့လို အပျသလို သားသမီးတှအေတှကျလညျးထိုကျသငျ့တဲ့အမှပေေးနိုငျရပါမယျ။
အိုစာမငျးစာကို ဆိုလိုပါတယျ။ ရှဖွေဈဖွဈ၊
ပိုကျဆံဖွဈဖွဈ ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျခနျြထားရသလို သားသမီး စီးပှားရေးလုပျဖို့ ထိုကျသငျ့တဲ့အရငျးအနီး ကိုလညျးထုတျပေးရပါမယျ။
အခဈြရဲ့သဘာဝဟာ နောငျမြိုးဆကျကိုပဲ ဆငျ့ပှားပါတယျ။
သားသမီး ကို ခဈြတယျဆိုတာ သတ်တဝါတိုငျးရဲ့ မှေးရာပါ သဘာဝဖွဈပါတယျ။ မိဘကိုရိုသတေယျဆိုတာ ဘာသာရေးအဆုံးအမနဲ့ သှနျသငျယူရတယျ။မှေးမွူယူရပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သားသမီးတှေ မိဘကိုပွနျကွညျ့ရှု့ စောငျ့လြှောကျဖို့မသခြောတတျဘူး။
မိဘမြားဟာ သားသမီး ( ၁၀ ) ယောကျကို အပွုံးမပကျြ ကြှေးမှေးနိုငျပမေဲ့၊ သားသမီး (၁၀ ) ယောကျဟာ မိဘ နှဈပါးကို ဆယျယောကျလုံးကပွနျကွညျ့နိုငျဖို့မသခြောနိုငျဘူး။
အိုတဲ့အခါမှာ ရှိတဲ့ကနျြးမာရေးကို အတိုကောကျရေးလိုကျတာပါ။ အိုလာရငျ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို ကိုယျဂရုစိုကျရတယျ။
မနကျတိုငျးလမျးလြှောကျတာမြိုး ပါဝငျသငျ့ပါတယျ။ ကောငျးကောငျးမလြှောကျနိုငျရငျလညျး ၊ လုပျရှားနိုငျသမြှ အတတျနိုငျဆုံး ကိုယျလကျလုပျရှားပေးသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျခွငျးဟာ ကိုယျ့အတှကျပါမဟုတျ၊ သားသမီးမြားအတှကျပါ လဒျတဈပါးဖွဈပါတယျ။ သူတို့ ကိုယျ့အတှကျ သိပျမပူရရငျ သူတို့အလုပျကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ လုပျလို့ရတာပေါ့ ၊
အိုလာရငျ စိတျနစေိတျထား မှနျမှနျကနျကနျ
ထားတတျဖို့လိုပါတယျ။ သားသမီး၊မွေး၊မွဈတှနေဲ့လညျးခဈြခဈြခငျခငျ စညျးစညျးလုံးလုံးနရေပါမယျ၊ကိုယျအသုံးမကတြော့ဘူးဆိုပွီး မသိမျငယျသငျ့ပါဘူး။ သခွေငျးတရားကို တှေးတောပွီး ကွောကျမနသေငျ့ပါဘူး။
တဈရကျအသကျရှငျရငျ တဈရကျအမွတျပဲ၊ တနျအောငျအသကျရှငျရမယျ ဆိုတဲ့စိတျမြိုး မှေးမွူ ရပါမယျ။ ကနျြးမာရေး အဆငျပွရေငျ အလှူပှဲတှေ၊ ကူညီမူ လုပျရှားမူတှေ ၊ ဘာသာရေးပှဲတှေ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဘကျကနပွေီးတော့မှ ပါဝငျလုပျရှားသငျ့ပါတယျ။ စိတျဓါတျရှငျလနျးပွီး သနျ့သနျ့ ပွနျ့ပွနျ့ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။
အသကျကွီးသူမြား အားလုံး ကနျြးမာခမျြးမွေ့ နိုငျကွပါစေ။
Originally posted 2018-10-27 15:28:00.